Accueil > Gazetin'ny nosy > Raharaha Andry Rakotovao: Niniana nampanginina satria….
Raharaha Andry Rakotovao: Niniana nampanginina satria….
Mbola voatana am-ponja hatramin’izao ilay mpamily ny fiara niaraka tamin-dRakotovao Andry tamin’ny fotoana nisian’ny famonoana azy tany Moramanga. Ity mpamily ity aloha nanomboka tamin’izay nahafatesan-dRakotovao Andry, mpandraharaha ara-bary fanta-daza izay, no voatana fa ny tohiny dia tsy re. Famonoana feno habibiana no natao tamin-dRakotovao Andry, volana maromaro lasa izao.
Re fa toa antony mampikatso ny raharaha ny fisian’olom-panjakana ambony iray isan’ny nanana sehatra tao amin’ny tontolon’ny fandraharahana vary, izay voakitikitika na voarohirohy na voatonontonona amin’ity raharahan-keloka bevava iray ity.
Dia tsy mitsahatra manara-maso ny ho fivoaran’ity raharaha ity ny maro na tsy manantena inona loatra aza noho izany olona ambony voarohirohy aminy izany.
Antenimierampirenena: Mandeha indray ny fanangonan-tsonia
Herinandro vitsy lasa izay no nisy fanangonan-tsonia ho fampitsaharana ny governemanta amin’ny asany na ilay antsoina hoe « Motion de censure ». Tsiahivina fa ny solombavambahoaka voafidy tany Betroka, Nicolas Randrianasolo, no tompon-kevitra tamin’ity fanangonan-tsonia voalohany ity saingy tsy tanteraka hatramin’ny farany izany, tafajanona eo amin’ny toerany ihany i Mahafaly Olivier sy ny governemanta tarihiny, ary lany nankatoavin’ireo depiote tao anatin’ny ora iray monja ny lalàna mifehy ny teti-bolam-panjakana ho an’ny taona 2018. Ankehitriny kosa dia fantatra fa miverina indray io fanangonan-tsonia io ary tsy i Nicolas Randrianasolo irery intsony no ao ambadik’izany fa solombavambahoaka vitsivitsy, ao anatin’izany ireo manohana an’i Hery Rajaonarimampianina na mpikambana amin’ny vondrona parlemantera HVM. Tsy fantatra mazava moa ny tena anton’izay fanangonan-tsonia izay fa raha ny siosion-dresaka mandeha dia tsy faly amin’ny praiminisitra sy ireo minisitra sasan-tsasany ao anatin’ny governemanta ireto mikononkonona fitsipahan-pitokisana ireto. Azo inoana fa misy hidiran’ilay fiara 4×4 ho an’ny depiote ihany koa izao zava-miseho eny amin’ny Tsimbazaza izao satria mandrak’ity ny androany dia tsy mbola nahazo ny fiara ireto olom-boafidy ireto. Asa moa raha ho tody hatramin’ny farany indray io fikasàna hanongana ny governemantan’i Mahafaly Olivier io satria raha ny hita, tao anatin’ny 4 taona latsaka nitondran-dRajaonarimampianina, dia nandamoka foana izany. Etsy ankilan’izay anefa dia mety ho tetika hahazoan’ireo solombavambahoaka vola, mialohan’izao fetin’ny Noely sy ny fetin’ny faran’ny taona izao izany eritreritra hanao fitsipahan-pitokisana izany.